Ianao Tsara ny fiainana ny Fiainana? — Trip LEE - OFISIALY SITE
Ianao Tsara ny fiainana ny Fiainana?
Tany am-piandohan'ity taona ity aho, dia ny fitsidihana miaraka amin'ny boky vaovao, The Good Life. tsirairay alina, Nomeko ny lahateny izay niezaka namaly ny fanontaniana, "Inona no dikan'ny hoe miaina ny fiainana tsara?” In Chattanooga, TN, dia voarakitra ny hafatra sy namoaka azy aho ambony. Hoy ny boky navoaka tamin'ny Oktobra 1, 2012 ary afaka hividy izany Eto. Manazava bebe kokoa momba ilay boky hoe Azonao Atao tsindrio Eto. Afaka mividy The Good Life Album Eto. Moa ve ianao tsara ny fiainana ny fiainana?
sonjj • Aogositra 19, 2013 amin'ny 9:53 aho • navalin'i
ity hafatra ity dia tena manentana ny fanahy!!! Misaotra anao Trip Lee!!! Mitovy amin'ny 45 taona tanora renin'ny 3 zaza rehefa eo ny faharoapolo taonany ary ny valo ambin'ny folo taona aho mitady foana ohatra ny tanora izay “ny fiainana ny fiainana tsara” amin'ny alalan'i Kristy!!! Dia mizara ny hafatra miaraka amin'ny ankizy fa dia hanohy hanaraka anao aho, satria tiako izany ary tiako ny mozika!!!
Tiffany LeRoux • Aogositra 19, 2013 amin'ny 9:53 aho • navalin'i
CherishJesusLuv • Aogositra 20, 2013 amin'ny 5:53 aho • navalin'i
Velona aho, ary efa nametraka ny tsara Fiainana ato anatiko :) Ary manantena ny hiaina miaraka amin'ny Mpanjaka mandrakizay ao amin'ny Hatsaran'ny fiainana mandrakizay miaraka Jesosy Kristy ny olona izay ny voninahitra rehetra noho.
Sasha • Aogositra 21, 2013 amin'ny 4:58 PM • navalin'i
Ilay lahatsary dia tso-drano! Nahafinaritra ahy ny nijery azy io. Misaotra an'Andriamanitra noho ny TENIN'ANDRIAMANITRA! Trip, Ny fitiavako fa manome mankany aoriana ny soratra masina izay lazainao. Very hafatra mahafinaritra sy tena aho mihomehy ny vazivazy. Ka marina momba izany akoho mpiara-!!!